Ilay Bamboo Ink Plus vaovao tsy misy bateria sy ho an'ny Windows 10 | Famoronana an-tserasera
Toa lainga io, fa ny fiandrasana ny tsy maintsy hanaovana lasa ny fividianana ireo bateria AAAA mankany amin'ny Stylussatria Wacom dia nanambara Stylus vaovao izay mifantoka amin'ny fanatsarana ny traikefa fanaovana sary ho an'ireo mpampiasa Windows 10.
Windows Stylus Workspace Windows Ink novaina ary antsoina hoe Bamboo Ink Plus izy io ho maodely azo averina ho an'ny mpamorona izay mety manadino ny mila ireo batery voalaza ireo.
Mpampiasa Ink Plus azon'izy ireo atao ny manilika ireo bateria AAAA ireo ary mifantoha amin'ity Stylus vaovao ity izay mitady traikefa famoronana mahafinaritra kokoa. Mampiavaka azy ny bokotra tokana izay, rehefa tsindriana, dia mandefa fampiharana mpamorona Windows 10 toy ny Bamboo Paper sy Screen Sketch.
Ny Bamboo Ink Plus dia miaraka fanekena mitongilana, fandraisana andraikitra lehibe kokoa sy torohevitra azo ovaina mba hitondra ny traikefa amin'ny sary sy ny sary amin'ny ambaratonga manaraka. Tokony hazava tsara fa tsy miatrika ny Wacom voalohany izay miala tanteraka amin'ny bateria isika, efa tamin'ny androny no nifotoran'ny teknolojia famokarana electro-magnetika hanomezana angovo ilaina.
Izany teknolojia izany mamela antsika hiara-miasa amin'ny Stylus tsy misy bateria na tariby ary fisaorana rehetra amin'ireo sensor izay miteraka sahan'andriamby. Ka ny stilosy vaovao azo havaozina miaraka amin'ireo endri-javatra voalaza ireo dia mihoatra ny fahatongavana ho an'ny katalaogin'i Wacom.
La Ny Bamboo Ink Plus dia mitentina 99,90 euro ary azo alaina ao amin'ny magazay Wacom. Tsy maintsy ho hitantsika ny fisian'ireo faritra ireo, satria amin'izao fotoana izao dia tsy miseho eto amin'ny firenentsika izany. Ny zava-drehetra dia ho raharaha miandry sy afaka mahita azy io hahazoana azy io. Hoy aho, fahatongavana iray manontolo avy any Wacom. Aza adino ny vaovao hafa momba Wacom sy ny fanohanany ny fifandraisana HDMI ary mahaliana izaitsizy izany noho ny antony mazava.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Wacom dia nanambara ny Bamboo Ink Plus mba hahafahanao manadino ny bateria